एसपी र व्यवसायीहरू मिलेर ७ करोड बढी लगानीमा खोलेको होटल :: नारायण खड्का :: Setopati
एसपी र व्यवसायीहरू मिलेर ७ करोड बढी लगानीमा खोलेको होटल
२०७६ साल, असोजतिर दाङ तुलसीपुरका पूर्व यातायात व्यवसायी इन्द्र शाहसहित पाँच जना मुगु, रारा ताल भ्रमणमा गए।
टोलीमा तुलसीपुर सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिएसपी विमल डाँगी, तुलसीपुरकै फेन्सी व्यवसायी हुर्मतकुमार डाँगी, काठमाडौं मेट्रो हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रकाश वली र काठमाडौंकै फेन्सी होलसेल बिक्रेता यज्ञमूर्ति न्यौपाने थिए।
पाँचै जना रारा देखेर लोभिए। तर त्यहाँ बस्न र खान सोचेजस्तो होटल पाएनन्। केही होटल भए पनि उनीहरूले भनेजस्तो सुविधा थिएन। शुल्क भने चर्को थियो।
अनि रारा किनारमै बसेर पाँच जनाले सल्लाह गरे– फरक र राम्रो 'हस्पिटालिटी' सहितको सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालन गरौं।
उनीहरूले तुरून्तै प्रक्रिया थाले। लगानी जोड-घटाउ गरे। तर होटल खोल्न भनेजस्तो जग्गा पाउन सकेनन्।
केही महिनाको अन्तरालमा फेरि यी पाँच जना पोखरा भ्रमणमा निस्किए।
त्यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा होटलले खेलेको भूमिकाबारे सरोकारवालासँग सोधिखोजी र छलफल गरे। पाँचमध्ये कसैसँग पनि यो क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव थिएन। तर पनि सरसल्लाहपछि उनीहरू आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भन्दै होटल खोल्ने टुंगोमा पुगे।
कहाँ खोल्ने त?
फेरि अलमल भयो।
सोचेजस्तो जमिन पाउन र किन्न तत्काल सम्भव थिएन।
उनीहरूले लामै छलफल गरे।
तत्कालीन सशस्त्र डिएसपी, अहिलेका एसपी विमललाई इन्द्रले एउटा प्रस्ताव राखे- तपाईंको खाली रहेको पुर्ख्यौली जग्गा होटलका निम्ति प्रयोग गरौं!
प्रस्ताव सुनेर सबैले आशा भरिएका नजर विमलतर्फ सोझ्याए।
तुलसीपुर बसपार्कदेखि करिब छ सय मिटर पश्चिम अर्थात् तुलसीपुर सडकखण्डमै वर्षौंदेखि विमलको करिब दस कठ्ठा जग्गा खाली थियो। विमलले घर सल्लाह गरेर जमिन लिजमा दिने भने। उनको परिवार राजी भयो। २५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने भए। मासिक भाडा ५४ हजार रूपैयाँमा।
जग्गा मिलेपछि उनीहरूले काठमाडौंमा मेट्रो हस्पिटालिटी प्रालि दर्ता गरे। कागजी प्रक्रिया पूरा भएपछि २०७६, फागुन २७ गतेदेखि उनीहरू होटल बनाउन थाले।
होटलको नाम पनि 'मेट्रो' नै राखे।
यज्ञमूर्ति होटल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चयन भए। इन्द्र म्यानेजिङ डाइरेक्टर र अन्य सञ्चालक समितिमा बसे। काम गर्न सहज होस् भनेर होटल म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी रहेका एसपी विमलका छोरा सायवजंग डाँगीलाई होटल सञ्चालक राखिएको छ।
उनीहरूले नयाँ होटल निर्माण थालेलगत्तै कोरोना महामारी सुरू भयो। लकडाउनले सबै ठप्प पार्‍यो। तर पनि उनीहरू रोकिएनन्। भित्रभित्रै होटलका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरिरहे। डेढ वर्षमा उनीहरूले परिकल्पना गरेजस्तो संरचना तयार भयो।
औपचारिक रूपमा उद्घाटन नभए पनि २०७८ को पहिलो दिनदेखि होटल सञ्चालनमा आयो। हाल स्थानीय प्रशासनले बेलुका आठ बजेसम्म होटल सञ्चालन गर्न दिने भनेपछि केही सजिलो भएको इन्द्रले बताए।
‘अझै हामीले सोचेजस्तो वातावरण छैन,’ होटलका एमडी इन्द्रले भने, ‘कोरोना जहिले अन्त्य हुन्छ र सहज रूपमा होटल सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण तयार हुन्छ, त्यसपछि बल्ल औपचारिक उद्घाटन गर्ने छौं।’
इन्द्रका अनुसार हालसम्म होटलमा एक साझेदार बराबर करिब एक करोड ३० लाख रूपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ। उनले भने, 'लगानी सात करोड नाघेको छ। अझै ४०/५० लाख खर्च गर्नुपर्ने छ।’
होटलमा लगानी गर्न इन्द्रले आफ्ना पाँचवटा बस बेचे। उनले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा १८ वर्ष बिताएका छन्।
‘मेरा पाँच वटा बस थिए, देशका विभिन्न भागमा चल्थे,’ उनले भने, ‘कोरोना र लकडाउनले यातायात क्षेत्र तहसनहस भयो। अर्कोतिर मेरो उमेरले पनि अब गाडीका पछाडि दौडिन ठीक ठानेन। अनि मैले नयाँ व्यवसाय रोजेको हुँ।'
सिभिल ओभरसियरका विद्यार्थी इन्द्रले दुई वर्ष तुलसीपुर नगरपालिकामा जागिरे जीवन पनि बिताएका थिए। तर मन रमाउन नसकेर छाडे। जागिर छाडेपछि उनी दुबइ पसे। त्यहाँ पनि उनी ड्राइभिङ गर्थे। चार वर्षजति काम गरेर फर्किए। त्यही बेला कमाएको पैसाले सवारीसाधन जोड्न सकेको उनी बताउँछन्।
झन्डै दुई दशक यातायात क्षेत्रमा लागिसकेपछि विकल्प खोज्दा होटल क्षेत्रमा आकर्षित भएको उनको भनाइ छ। अर्कोतिर तुलसीपुरमै पनि राम्रो होटल नभएकाले आफूहरूले यहीँ पहल गरेको उनी बताउँछन्।
‘एकान्त, शान्त र पारिवारिक वातावरणको होटल तुलसीपुरमा कमै छन्,’ उनले भने, ‘मेट्रो होटलले त्यसको अभाव पूर्ति गर्छ भन्ने आश छ।’
तुलसीपुर-९, दोघरेमा किचन, रेस्टुरेन्ट, सभाहल र आवासको छुट्टाछुट्टै भवनसहित बनेको छ मेट्रो होटल। इन्द्रका अनुसार यहाँ झन्डै पाँच सय मानिस अटाउने हल, अर्को अलि सानो हल, विवाह मण्डप पनि छ। कसैले जन्मदिन मनाउन चाहे त्यसका लागि अलग्गै ठाउँ र दुई तले कफी हाउस पनि होटलको अर्को विशेषता हो।
अहिले होटलमा २२ जना कर्मचारी काम गरिरहेका छन्। सेफ निमकान्त डाँगी हुन् जोसँग देश-विदेशका तारे होटलमा काम गरेको अनुभव छ। स्थानीय कलेजहरूमा होटल व्यवस्थापन पढाउँछन् पनि। मेट्रो होटलमा काम गर्ने प्रायः युवा उनकै विद्यार्थी हुन्।
भविष्यमा मेट्रो होटलले साना गाडी किन्ने योजना बनाएको छ। दाङ, सल्यान, प्युठान, रारा लगायत क्षेत्र घुम्न जाने पर्यटकको सुविधानिम्ति ती गाडी सञ्चालन हुनेछन्।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै आफ्नो जीविकोपार्जन स्रोत जुटाउनु होटलको प्रमुख लक्ष्य भएको इन्द्रले बताए। त्यस्तै लामो समय यातायात क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई होटल प्रवर्द्धनमा सदुपयोग गर्नु उनको लक्ष्य हो।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २४, २०७८, ०८:१५:००